M/weynaha Somalia oo shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedka Galmudug… – Hagaag.com
M/weynaha Somalia oo shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedka Galmudug…
Posted on 22 Seteembar 2018 by Admin in National // 0 Comments
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa shir degdeg isugu yeeray madaxda kala irdhowday ee Dowlad Goboleedka Galmudug, si loo soo afjaro xaaladaha siyaasadeed iyo amni ee kasoo cusboonaaday deegaannadaas.
War saxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Madaxweynuhu uu si dhaw ula socdaa khilaafaadka siyaasadeed ee haatan ka dhex jira madaxda Dowlad Goboleedka Galmudug, waxa uuna ka walaacsanyahay isku dhacyada qaar kamid ah beelaha deggan Gobolka Galguduud oo sababay dhimasho, dhaawac iyo barakac.
Madaxda Galmudug ee kala fadhiya Dhuusamareeb iyo Cadaado ayaa maalmo ka hor xil qaadis midi midi ku taag aheyd isku sameeyay, waxaana labada dhinac ay qabanayaan doorasho iska soo horjeeda.
“Waxaan ku rajo weynahay in dhammaan dhinacayda ay taabanayso arrintan ay muujiyaan tanaasul, biseyl siyaasadeed iyo in danta guud laga hormariyo midda gaarka ah si hore loogu sii wado dadaalladii ay horumuudka ka ahayd Dowladda Federaalka ee lagu dhammeystirayay heshiisyadii ay hore u kala saxiixdeen madaxda Galmuudg.”ayaa lagu yiri war saxaafadeed caawa laga soo saaray Madaxtooyada.
Dowladda Federaalka ayaa horay ugu guuldareysatay dhex dhexaadinta Madaxweynaha Galmudug, kuxigeenkiisa iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka, oo la xiriiray xalinta khilaaf ka dhashay fulinta Heshiiskii Jabuuti ee Ahlusuna iyo Galmudug.